သတင်း - Gel Nail ထုတ်လုပ်သူသည် ဂျယ်ဆေးဖြင့် လက်သည်းပန်းချီကို မည်သို့အာရုံစိုက်ရမည်ကို သင်ပြသနေပါသလား။
ဆောင်းရာသီမှာ သတိထားပါ။လက်သည်းဆိုးဆေးမင်းလက်သည်းပေါ်မှာအရောင်သစ်အလှတရား - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်gel လက်သည်း UV ဆိုးဆေး တင်သွင်းသူအောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါမည်
1. လက်သည်းအပိုင်းသည် အရမ်းရှည်မနေသင့်ပါ။
2. လက်သည်းအမြစ်၏အရေပြားကို မကြာခဏ နှိပ်နယ်ပေးပါ။
3. လက်သည်းဆိုးဆေးသည် ပါးလွှာသည်။
4. ပြင်သစ်ပုံဆောင်ခဲချပ်ဝတ်တန်ဆာဖြင့် ပြုလုပ်ထားလျှင် crystal ပန်းရောင်ကို အသုံးပြုတာ အကောင်းဆုံးပါ။
1. ဆောင်းရာသီမှာ လက်သည်းခြေသည်းဆိုးဖို့ လိုအပ်တဲ့အခါ ယေဘုယျအားဖြင့် လူတိုင်းက ဆောင်းရာသီမှာ ပိုထူတဲ့လက်သည်းတွေကို ဝတ်ဆင်ကြတဲ့အတွက် လက်သည်းရှည်ရှည်တွေကို မရွေးချယ်မိဖို့ သတိပြုပါ။ဥပမာအားဖြင့်၊ ဆွယ်တာအင်္ကျီ၏ချည်မျှင်ကို လက်သည်းရှည်များ သို့မဟုတ် လက်သည်းအပိုင်းအစများပေါ်တွင် အလွယ်တကူဆွဲယူနိုင်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လက်သည်းများကို ကွဲစေမည်ဖြစ်သည်။လက်သည်းများ ရှည်လွန်းပါက လက်အိတ်များ ဝတ်ဆင်ခြင်းသည်လည်း အလွန်အမင်း အဆင်မပြေ ဖြစ်စေပါသည်။
2. ဆောင်းရာသီမှာ လက်သည်းဆိုးပြီးရင် လက်သည်းခြေသည်းတွေရဲ့ အရေပြားကို နှိပ်နယ်ပေးဖို့ အိပ်ရာမဝင်ခင် လက်ခရင်မ်ကို လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆူးများဖြစ်စေသည်။
3. ဆောင်းရာသီမှာ လက်သည်းဆိုးဆေးကို ပါးလွှာတဲ့အလွှာကိုသာ လိမ်းပေးရပါမယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လက်သည်းဆိုးဆေးကို ထူထဲစွာလိမ်းထားရင် ဆောင်းရာသီမှာ လျှင်မြန်စွာ ခြောက်သွေ့သွားတတ်တာကြောင့် လက်သည်းဆိုးဆေးက အခွံခွာပြီး လက်သည်းကို ဆိုးသွားစေပါတယ်။ .အချိန်မကုန်ဘူး။
4. ဆောင်းရာသီ လက်သည်းပန်းချီတွင် ပြင်သစ်ပုံဆောင်ခဲလက်သည်းများ ပြုလုပ်ရန် ရွေးချယ်ပါက၊ ဆေးသုတ်ပါက လက်သည်းခွံ၏ Qianyuan သည် အဝတ်များ၏ လက်သည်းများကို အလွယ်တကူ ထိတွေ့နိုင်သောကြောင့် Crystalမှုန့်ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။လက်သည်းအလှကို ထိခိုက်စေရုံသာမက အကြာကြီးလုပ်ထားတဲ့ လက်သည်းတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့လည်း ခက်ခဲပါတယ်။
ဆောင်းရာသီရောက်ရင် ရာသီဥတုက အေးပြီး ခြောက်လာမယ်။ချမ်းအေးတဲ့ဆောင်းရာသီမှာတောင် လက်သည်းဆိုးဆေးကြိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရှိမယ်။ဒါပေမယ့် ဆောင်းရာသီ ရာသီဥတုကြောင့် သတိမထားမိရင် လက်သည်းတွေ ကျိုးလွယ်ပြီး လက်ချောင်းထိပ်လေးတွေ ကျိုးတတ်တာမို့ ဆောင်းရာသီမှာ လက်သည်းထိန်းသိမ်းမှု အလုပ်ကို ကောင်းကောင်းလုပ်ရပါမယ်။ဆောင်းရာသီတွင် ရာသီဥတုသည် အလွန်ခြောက်သွေ့သောကြောင့် လက်သည်းများကို ဂရုစိုက်ပြီး သင့်လက်သည်းများ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ကာ ၎င်းတို့ကို ပိုမိုနူးညံ့ပြီး ရွေ့လျားစေရန်အတွက် သင့်လက်သည်းများကို ဂရုတစိုက်လုပ်ဆောင်သည့်အခါတွင် ပိုမိုသတိထားရပါမည်။
စာတိုက်အချိန်- အောက်တိုဘာ ၁၆-၂၀၂၁